Gxila kufana neHuozhou yokushisa iphrojekthi
IShanxi Huozhou yokushisa isikhungo i-Huozhou "izimpahla ezintathu nemboni eyodwa" iphrojekthi yokulungisa ukushisa, Njenge-valve ebambe iqhaza ekuguqulweni kwephrojekthi ngoJuni 2020, lapho "izimpahla ezintathu nemboni eyodwa" zibhekisa ekunikezelweni kwamanzi, ugesi, ukufudumeza nokuphathwa kwempahla ku indawo yomndeni yabasebenzi bamabhizinisi kahulumeni (kufaka phakathi amabhizinisi aphakathi nendawo namabhizinisi kahulumeni wendawo). Ukuhlukaniswa nokunikezwa “kokuhlinzekwa okuthathu kanye nemboni eyodwa” kubhekisa emsebenzini wokuphatha onenqubomgomo eqinile nobuchwepheshe, ukumbozwa okubanzi nokusebenza okuyinkimbinkimbi kakhulu lapho amabhizinisi kahulumeni (kufaka phakathi amabhizinisi nezikhungo zocwaningo lwesayensi) ahlukanisa ukuphathwa kwamanzi, ugesi nokushisa. isebenza endaweni yomndeni kusuka kumabhizinisi kahulumeni futhi iwadlulisele kumayunithi ezenhlalo ukuze abaphathe.
Njengama-valves wephrojekthi yokushisa ye-Huozhou ikakhulukazi ahlinzeka ngamavalvu ovemvane ,ama-valve kagesi kanye nama-valve ebhola ashiselwe.
Faka isithombe (1)
Indlela yokuxhuma kagesi kavemvane kagesi
Ikakhulu: uhlobo lwensimbi nohlobo lwesilucu; Isimo sokufaka uphawu lwe-valve kavemvane kagesi ikakhulu sifaka uphawu lwenjoloba nensimbi yensimbi. Ukukhanya kwesiginali yamandla ngesikhathi sokuvulwa nokuvalwa kwevelufa kavemvane kagesi. Umkhiqizo ungasetshenziswa njenge-stop valve kanye ne-valve elawula uhlelo lwamapayipi. Ngedivayisi yokuvula nokuvala ngesandla, uma ukunqanyulwa kwamandla kunqanyuliwe, kungasetshenziswa ngesandla ngaphandle kokuthinta uhlelo lokusebenza.
Isimiso sokusebenza segesi kavemvane kagesi
Amandla kagesi asebenzayo ngokuvamile afaka phakathi: AC220V, AC380V, njll. Isiginali yokufaka: 4 ~ 20mA, 0 ~ 10V namanye amasiginali wamanje abuthakathaka. Ngemuva kokuthi i-actuator kagesi eguquguqukayo kanye nenduku ye-valve ixhunyiwe futhi yalungiswa iphutha; Sebenzisa amandla kagesi njengamandla okushayela ukushayela ipuleti levemvane leveluthi ngokujikeleza okungu-0 ~ 90 ° okuyingxenye. Thola isignali engu-4 ~ 20mA kusuka ohlelweni lokulawula ezishintshayo ukuze ulawule ngokunembile i-valve switching degree, ukuze kufezekiswe ukulawulwa nokulawulwa kwamapharamitha wokufunwa ahlukahlukene njengokugeleza, izinga lokushisa nokucindezela.
Izici zobuchwepheshe ze- welding ball valve
1. Isakhiwo somzimba we-valve sishiselwe ngokuhlangene ngaphandle kokuvuza kwangaphandle.
2. Isihlalo se-valve sakhiwe ngendandatho yokufaka uphawu lwe-PTFE nentwasahlobo, enokuguquguquka okuqinile ekushintsheni kwengcindezi nokushisa futhi ngeke ikhiqize noma yikuphi ukuvuza ngaphakathi kobubanzi bokusetshenziswa.
3. Isakhiwo sokulwa sokuvuza kwesiqu se-valve sakhiwa nge-PTFE self-seal gasket eyodwa ne-O-ring eyodwa ezansi kwesiqu se-valve, ama-O-rings amabili nama-gaskets amabili e-PTFE ukuqinisekisa ukuthi akukho ukuvuza.
4. Izinto zomzimba we-valve ziyafana nalezi zepayipi, futhi ngeke kube khona ukucindezeleka okungalingani, ukukhishwa kanye nokukhubazeka ngenxa yokuzamazama komhlaba nezimoto ezidlula phansi.
5. Umzimba we-valve ulula futhi kulula ukufudumala.
6. I-valve yebhola egqitshwe ngqo ingangcwatshwa ngqo ngaphansi komhlaba ngaphandle kokwakha umthombo omkhulu we-valve. Kuphela umthombo omncane ongajulile odinga ukubekwa phansi, osindisa kakhulu izindleko zokwakha nesikhathi sobunjiniyela.
7. Ubude bomzimba we-valve nokuphakama kwesiqu se-valve kungalungiswa ngokuya ngezidingo zokwakhiwa nokwakhiwa kwepayipi.
8. Ukunemba kokusebenza komkhakha kunembile kakhulu, ukusebenza kulula, futhi akukho siphazamiso esibi.
Kunezindlela ezimbili zokuxhuma: i-welding ne-flange.
11.Imodi yokusebenza: isibambo, igiya (mpo / evundlile)
12. Ngaphansi kwesimo sokusebenza okujwayelekile nokusetshenziswa kwe-valve, isikhathi sewaranti yiminyaka engama-20.
Ukwakheka kwe-welding ball valve
1. I-valve isebenzisa ipayipi lensimbi elingenamthungo licindezelwe i-valve yebhola ehlanganisiwe.
2. Isiqu se-valve senziwe ngensimbi engagqwali ye-AISI303 kanti umzimba we-valve wenziwe ngensimbi engagqwali ye-AISI304. Yenziwe ngokuqeda ukugaya futhi inokusebenza okuhle kakhulu kokufaka uphawu nokumelana nokugqwala.
3.Ukubekwa uphawu kuthatha i-carbon eqiniswe i-PTFE ethambekele ekubekeni indandatho, futhi ingcindezi engemihle isendaweni eyindilinga, ukuze ukubekwa uphawu kube nezinzuzo zokuvuza kwe-zero nempilo ende yokusebenza.
4.Imodi yokuxhuma ye-valve: i-welding, intambo, i-flange, njll ukuze abasebenzisi bakhethe. Imodi yokudlulisa: isibambo, i-turbine, i-pneumatic, ugesi nezinye izakhiwo zokudlulisela zamukelwa, futhi inkinobho iyaguquguquka futhi ilula.
5. I-valve inezinzuzo zesakhiwo esihlangene, isisindo esincane, ukufakwa okulula okushisa nokufakwa okulula. Le valve ivame ukufakwa ngokuvundlile.
6. I-valve yebhola ehlanganisiwe edidiyelwe yenziwa ngokumunca ubuchwepheshe bangaphandle nokuhlanganiswa nesimo sangempela eChina. Yenziwe eChina esikhundleni sokungeniswa ukugcwalisa igebe lasekhaya. Isetshenziswa kabanzi ezinkambeni zamapayipi akude njengegesi yemvelo, uphethiloli, ukushisa, imboni yamakhemikhali nenethiwekhi yamapayipi wamandla ashisayo.
Isithombe sesayithi (1)
Isithombe sesayithi (2)
“Izimpahla ezintathu nemboni eyodwa” kusiza ekunciphiseni umthwalo wamabhizinisi kahulumeni futhi kugxilwe ekuthuthukisweni kwamabhizinisi amakhulu. Kusiza futhi ekuhlanganisweni kwezinsizakusebenza, uguquko kanye nokwenziwa ngcono kwengqalasizinda nokuqhubeka nokwenza ngcono indawo yokuhlala yabasebenzi. NJENGE-valve ihlale inamathela kwifilosofi yebhizinisi "yobuqotho, ukuqamba izinto ezintsha, ukubambisana nokuwina-win", izibumba ngekhwalithi yomkhiqizo nokwaneliseka kwamakhasimende, futhi izedlula yona ngokufuna okungapheli nokuthuthuka okusimeme.
Isikhathi sokuthumela: Jan-13-2022